Timo jarista wejiga ragga: sawirro iyo figrado wejiyada oo dhan | Ragga Stylish
Timo jarista ragga
Timaha jarjaray ayaa ka mid ahaa kuwa ugu caansan tobanaan sano. Maaddaama ay tahay nooc run ah oo timaha ragga ka mid ah, Waa sharad aamin ah marka ay timaado in timo la jaro.
Iyo faa'iidooyin badan: Marka la barbardhigo timo-jarista kale, jaangooyaha ayaa runtii si fiican ula shaqeeya dhammaan qaababka wajiga. Intaa waxaa dheer, waxaa badanaa lagu kala soocaa timo dayactir hooseeya. Taas oo macnaheedu yahay dhaqida, qalajinta iyo qaabeynta waxay qaadataa waqti yar iyo dadaal. Aad ayey u qiimo badan tahay inaad xisaabta ku darsato haddii aad ka mid tahay kuwa u baahan in daqiiqad subaxnimo aan la taaban karin.
1 Sida loo helo jadwalka caadiga ah
2 Sida loola jaan qaado qaabka wejigaaga
2.1 Wajiga Oval
2.2 Wajiga Wajiga
2.3 Weji dheer
3 Timo jarista ragga timaha wanaagsan
Sida loo helo jadwalka caadiga ah
On gradients, nape iyo dhinac ayaa laga tagay gaaban. Inta soo hartay si tartiib tartiib ah ayey u sii dheeraanayaan markii aan ku dhowaaneyno madaxa korkiisa. Qaabkeedu wuxuu ku xidhan yahay qof walba dookhiisa. Sirta ka dhigaysa inay si fiican u shaqeyso waa in la tixgeliyaa qaabka wajiga marka la sameynayo dhammaan kala duwanaanshaha la fulin karo. Sidaa darteed, waxaad kala dooran kartaa xulashooyin badan oo xagga kore ah: kala tagga dhinaca, timaha gadaal, oo leh biinamo, taabasho leh, baraf leh, jahwareer la baray, aad u gaaban, iwm.
Haddii aad rabto duug iskuul duug ah, aad ayey muhiim u tahay in natiijadu ay noqoto mid dabiici ah intii suurtagal ah. Tani waxay ka dhigan tahay inaysan jiri doonin waxyaabo is-khilaafsan oo xoog leh oo u dhexeeya aagagga wax lagu jarayo. Sharci kale oo suulka ah maahan inuu ku bilowdo wejigiisa aad u sarreeya xaga dambe ee madaxa. Khubaradu waxay tilmaamayaan lafta occipital (saxanka sameeya qaybta hoose iyo dhexe ee dhakada dambe) oo ah bar bilow si aan timaha yaraaday uusan u noqon mid hoose. Intaa ka dib, oo aan ka duwanayn khafiifka hoose, dhererku wuxuu u kordhayaa si habsami leh oo u dhigma marka aan kor u qaadno dhakada.
Filimka iyo telefishanka ayaa metelaya mid ka mid ah ilaha ugu fiican ee dhiirrigelinta timaha, marka ay timaaddo wejiyada, ma jiro wax ka reeban. Way fududahay in la helo tixraacyo, qaar iyaga ka mid ah waa kuwo cajiib ah, sida ku jirta taxanaha qareenka, 'Suits'. Jilayaasha 'Suits' (Gabriel Macht iyo Patrick J. Adams) isboorti timo jilicsan oo jilicsan si ay ula jaan qaadaan dharkooda casriga ah.
Sida loola jaan qaado qaabka wejigaaga
Haddii aad leedahay weji oval ah, waxay ka dhigan tahay inay si fiican isu dheellitiran tahay. Marka waad awoodi kartaa nooc kasta oo timo jar ah, xitaa qaab ciidan ah oo calaamadeeya astaamahaaga.
Xaaladdan oo kale, waa laga gaabiyey ama aad ayuu uga gaaban yahay xagga sare, iyadoo la adeegsanayo maqas haddii la doonayo natiijo ka yar xanaaq badan. Tani waxay u oggolaaneysaa in kiliyaha uu u gudbo marka hore labada ka dibna, dhinacyada iyo qoorta, midda, isagoon joojin doonin inuu dabiici noqdo. Waxa kale oo aad ku dhammayn kartaa wejigooda eber natiijooyin aan caadi ahayn. Dadka caanka ah sida Jamie Foxx ama Will Smith ayaa tusaale u ah. Haddii aad u tagto qaabka militariga ama aad doorbiddo wax dheer, tixgeli inaad nadiifiso wejigaaga. Taasi waxay xoojin doontaa qaabdhismeedka laftaada, taas oo had iyo jeer ah fikrad wanaagsan.
Furaha yareynta wareegga wejiga ee timo jarista wejiga waa in la helo qaab fiiqan, laakiin aan lumin dheelitirka. Haddii kani yahay nooca wajigaaga tixgeli inaad dhinacyada aad u gaabiso oo aad dusha sare siiso dherer badan. Weydiiso timo-jaarahaaga inuusan is-jarin marka uu ka shaqeynayo mashiinka gooyuhu aad uga gaaban yahay dhinacyada. Sidoo kale, bilaabista qalinjabinta ilaa nape iyo dhinacyada sidoo kale waxay ka caawineysaa in wajiga la cidhiidhiyo.
Haddii aad leedahay weji dheer, iska ilaali timo yaraatay oo aad uga gaaban dhinacyada. Fikrad ahaan, isticmaal maqas. Natiijo wanaagsan ayaa sidoo kale lagu gaari karaa timo jare iyadoo la hagaajinayo qaybta hoose ee macbudka oo ah khad cas. In timaha intiisa kale lagu jaro lakabyo maqas ah, iyadoo korka laga ilaalinayo dherer deeqsinimo leh, iyo in laga fogaado gebi ahaanba in la nadiifiyo foodda waa faahfaahin kale oo loo arko inay ku qanacsan tahay noocan wajiga ah.
Timo jarista ragga timaha wanaagsan
Timo jarista ayaa si weyn ugu shaqeysa ragga leh timo wanaagsan. Furaha ayaa ah in lagu qiyaaso dusha sare. Si tan loo sameeyo, waa la jarjaray (qufullo dhaadheer ayaa kordhiya culeyska timaha) iyadoo la siinayo muuqaal. Si aad u qaabeyso, tixgeli jahawareer la bartay oo qurxinaya qaabka wajiga, sida midka sawirka kore ku yaal. Markaad dejineyso qaabkaaga, iska ilaali alaabooyinka culus ee kaa caawinaya timahaaga inay noqdaan kuwo khafiif ah oo sabool ah. Bedelkeeda tixgeli waxsinka budada ah, ee jirka siiya oo leh dhammaystir matte ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Timaha » Timo jarista ragga
Jimicsiyada si ay caloosha u weynaadaan